रोचक जानकारी – Page9– MeroJilla.com
साउदी राजकुमार संसारकै सबैभन्दा महंगो महलको मालिक Thursday, December 21st, 2017
काठमाडौं, ६ पुस। । संसारकै सबैभन्दा महंगो मानिएको फ्रान्सको महल साउदीका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले किनेको खुलेको छ । २ वर्षअघि फ्रान्समा रहेको ‘चतेऔ लुइस एक्सआइभी’ महल ३०० मिलियन अमेरिकी डलर ( करिव ३१ खर्ब रुपैयाँ) मा बेचिएको थियो । त्यस समयमा उक्त महल खरिद गर्ने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिएको थियो । 'फर्चून म्यगजिन'ले उक्त महल संसारमा सबैभन्दा महंगो रकममा बेचिएको उल्लेख..
धन संचयमा शरीरमा भएको कोठीको प्रभाव Tuesday, December 19th, 2017
हाम्रो शरीरको अंगमा भएको कोठीको आआफ्नै खालको महत्व वोकेको छ । अंगमा भएको कोठीको विशेषतालाई पहिचान गर्न सक्यो भने यसले बढी लाभ प्रदान गर्दछ । समुन्द्र शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न भागमा हुने कोठीले फरक फरक फल अथवा लाभ दिन्छ । कति कोठीले हामीलाई हानी पनि पुर्याई रहेको हुन्छ । बायाँ गालामा कोठी हुनु खर्चालु हुने लक्षण हो । यस्ता ब्यक्तिको हातमा पैसा परे बचत हुँदैन । यस्ता..
६ वर्षीय बालकको कमाइ १ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी ! Saturday, December 16th, 2017
काठमाडौं,१ पौष । ६ वर्षका अमेरिकन बालकले काम गरेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाएका छन् भन्दा कमैलाई विश्वास लाग्न सक्छ । तर, अमेरिकामा आफ्नो आमाबाबुसँग बसिरहेका रेयान नाम गरेका ६ वर्षीया बालकले ‘यूट्युब च्यानल’मा खेलौनाहरुको समीक्षा गरेर अहिलेसम्म ११ मिलियन डलर (करिव १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) कमाइसकेका छन् । ती बालकले बजारमा आएका नयाँ खेलौनाहरुको समीक्षा गरिएको..
विश्वका मरुभूमि र तिनको महत्व Monday, December 11th, 2017
काठमाडौं, २५ मंसिर । विगतमा मरुभूमिहरु साँच्नै अनुत्पादक थिए । अर्थहिनजस्तै थिए । मरुभूमिसित मान्छेको डर थियो । तर अब यो विस्तारै हटेको छ । आजकल त प्रायः मानिसहरु मरुभूमिप्रति मोहित पनि भएका छन् । यूरोप महादेशवाहेक विश्वका अन्य सबै महादेशमा मरुभूमि पाईन्छ । विश्वको मानचित्र पल्टाएर हेर्ने हो भने २० डिग्री उत्तरी अक्षांशको बीचमा मरुभूमिको फैलावट छ । सबैभन्दा धेरै भूभाग..
चाँडै मर्छन् यस्तो बानी भएका मान्छे, अनुसन्धानमा भयो आश्चर्यजनक खुलासा Thursday, November 30th, 2017
एजेन्सी। हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने सानातिना काम पनि मृत्युको कारण बन्छन् भन्ने थाहा पाउँदा तपाइँलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर हालै भएको एक अनुसन्धानमा यस्तै आश्चर्यजनक खुलासा भएका छन् । बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानमा प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गर्दै धेरै रिसाउने मानिसहरुको समयभन्दा पहिल्यै मृत्यु हुने खुलासा गरेका छन् । मानिसहरुमा बढिरहेको रिसाउने प्रवृत्तिका विषयमा..
अध्ययन र भ्रमण खर्चको लागि २९ लाख डलरमा कुमारीत्व लिलाम Thursday, November 23rd, 2017
काठमाडौं, ७ मंसिर । एकजना अमेरिकी मोडलले अध्ययन र भ्रमण खर्चको लागि आफ्नो कुमारीत्व २९ लाख अमेरिकी डलरमा बेचेको बताएकी छन् । १९ वर्षीया अमेरिकी मोडल गिसेलाले २९ लाख अमेरिकी डलरमा आफ्नो कुमारीत्व बेचेको र उक्त रकम आफ्नो अध्ययन र भ्रमण खर्चमा प्रयोग गर्नै बताउँदै ‘सपना पुरा भएको’ बताएकी हुन् । एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्मनको कम्पनि ‘सिन्ड्रेला एस्र्कोट’मार्फत उनले आफ्नो..
जागिर गर्ने श्रीमतीले बाहिरै सम्बन्ध राखेपछि….
वैवाहिक जिवनमा निरासा तथा बेमेलको कुरा नौलो होइन, विश्वव्यापी सनातन सत्य हो । तर लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेझैँ धेरै दम्पतिको हकमा यस्तो झगडा छिटै सामसुम भैहाल्छ अनि हठात् अँगालोमा बाँधिन्छन् लोग्नेस्वास्नी । लोग्ने स्वास्नी भएपछि सम्भोग भन्ने कुरा सामान्य हो र वैवाहिक जिवनको लागि एक अनिवार्य शर्त जस्तै हो । तर जापानमा भने आधाजसो दम्पतिले सहबास नगर्ने गरेको..
पर्समा भूलेर पनि नराख्नुहोस यी ७ सामान, भइन्छ कङ्गाल Wednesday, November 22nd, 2017
अधिकांश मानिसले कयौँ पटक पर्समा अनावश्यक चीजहरू राख्ने गर्दछन्। हाम्रो अल्छीपनका कारण यस्ता चीजलाई हटाउन प्रति हामी त्यति धेरै इच्छुक हुँदैनौ । तर के तपाईलाई थाहा छ, यो आलस्य र गल्ती नै समस्याको कारण बन्छ । कतिपय पर्समा राखिएको चीज यस्ता हुन्छन्, जसले धनको आगमनलाई रोक्छ । यदि तपाईको पर्समा पनि यस्ता ७ अनावश्यक चीज रहेका छन् भने तुरुन्त हटाउनुहोस् । पुरानो फाटेको वा..
आजको दुनियाँमा हामीलाई मानिसहरु चिन्न निकै नै मुस्किल पर्छ । कसको मनमा के छ बुझ्न सकिदैन । जसको कारण हामीले पाइला पाइलामा धोका खाइरहेका हुन्छौं । यस विषयमा केही कुरामा मात्रै हामीले ध्यानदिने हो भने हामी धोकाबाट बच्न सक्छौं । निम्न अनुसारको व्यवहार यदि तपाईले साथी मार्फत पाउनु भएको छ भने तुरुन्तै टाढा हुँदा राम्रो हुन्छ । १.प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आफ्नो गुनगान गाउँने मान्छे..
१. चियाकफी सामान्यतः मानिसहरु खाना खाएपछि एक कफ चिया या कफी पिउन मन पराउँछन् । तर, यदि तपाईंलाई राम्रो निद्रा चाहिएको छ भने यो बानी छाड्नुस् । यदि चियाकफी खानुहुन्छ भने समयमा निद्रा नलाग्ने त छ नै, आएको निद्रा पनि खलबलिने सम्भावना हुन्छ । चिया या कफीमा पाइने क्याफिनले निद्रा भगाउने काम गर्छ । २. चकलेट राती सुत्नुअघि खान नहुने खाद्यपदार्थमा चकलेट एक नम्बरमा पर्छ । यसले शरीरमा..
लोग्ने स्वास्नी दायाँ बायाँ , कुन दिशामा सुत्दा राम्रो ? जानिराखौं Wednesday, November 15th, 2017
यदी श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईहरुबीचको सम्बन्धले मात्र काम गरेको हुदैन । दुईजनाबीचको असमझदारीका कारण यस्ता समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारणमा वास्तु दोष पनि रहेको बताइन्छ । जसको हलका लागि तपाईले वास्तुका नियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेडरुम लोकेसन बेडरुम सधैं दक्षिण पश्चिम वा उत्तर पश्चिम दिशातर्फ हुनुपर्छ । यसले पार्टनरबिच माया र एक अर्कालाई..